प्रोन पोजिशन : अक्सिजन बढाउनमा कति उपयोगी छ ? - समृद्ध नेपाल
कोरोना संक्रमण वढेसँगै त्यसबाट बच्नका लागि वा रोकथामको लागि विभिन्न उपाय खोज्न थालिएको छ । यसमा आधुनिक तौरतरिकादेखि प्राचिन विधीहरुसम्म छन् ।जस्तो कि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कायम राख्ने प्रोन पोजिशन । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएमा यस किसिमको पोजिशन अपनाउन सकिने बताइएको छ ।
के हो प्रोन पोजिशन ?जुन हिसाबले अहिले प्रोन पोजिशनबाट अक्सिजनको मात्रा बढाउने कुरा गरिएको छ, त्यसमा केही विधी पालना गर्दै पेटको बलले सुत्नु हो । यसरी सुत्दा फोक्सोको कोशिका खुल्छ र अक्सिजनको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ । मेडिकल साइन्सको दुनियामा प्रोन पोजिशनको प्रायेग बर्षौदेखि हुँदै आएको छ ।
अक्सिजनको मात्रा कसरी पुरा गर्ने त ? यसको प्राकृतिक र सरल विधी हो, प्रोन पोजिशन । क्षणिक रुपमा भएपनि यसले राहत दिन्छ ।कसरी गर्ने?यसका लागि सुरुमा चार वा पाँच सिरानी चाहिन्छ । अब पेटको बलले घोप्टो परेर सुत्नुपर्छ । यसरी सुत्दा गर्दनको मुनी सिरानी राख्नुपर्छ । कम्मरको मुनी र खुट्टाको मुनी पनि सिरानी राख्नुपर्छ । सिरानी राखेपछि पेटलाई ओछ्यानको सतहमा छुन दिदैन । यदि पेट ठूलो छ भने पेटको ठीक मुनी तीन वा चार सिरानी राख्नुपर्छ ।
यदि यो पोजिशन कुनै कोरोना रोगीले अपनाउँदै हुनुहुन्छ भने चिकित्सकको परामर्श लिनैपर्छ । संभव भएसम्म चिकित्सककै निगरानीमा गर्न सकिन्छ । किनभने कति समय वा कसरी यस्तो पोजिशनमा बस्ने भन्ने कुरा विज्ञहरुले नै तय गर्नेछन् । यदि संक्रमित व्यक्तिलाई सास लिन एकदमै समस्या भएको छ भने प्रोन पोजिशनको मात्र भर पर्नु हुँदैन अक्सिजन बेडको प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी हुन्छ अनलाइन बाट ।
विहे गरेका भाइरल अघोर बाबा धुरुधुरु रुदै मिडियामा !
कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरुलाइ आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! पूरा पढ्नुहोस !
अष्ट्रेलियाको डढेलो रोकथामका लागि जुटे नेपाली !
खुसीको खबर : आज एक हजार ७७५ सङ्क्रमितबाट कोरोनालाई जितेर निको भै घर फर्के !